ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ The Generals of Burma: Khin Maung Than - 080008 ခင်မောင်သန်း
Khin Maung Than - 080008 ခင်မောင်သန်း
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင်သန်းဟာ OTS - 31 အပတ်စဉ် ကျောင်းဆင်း ဖြစ်ပြီး ခလရ (၈၉) ကလေးမြို့ မှာ တပ်ရင်းမှူး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး (Col. G.S) တာဝန်ကို ရယူခဲ့ပြီး တပ်မ (၈၈) မှာ ဒုတပ်မမှူး၊ ထို့နောက် တပ်မ (၁၁) တပ်မမှူး ထိုမှ တဆင့် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး တာဝန်များကို အဆင့်ဆင့် တိုးမြှင့် ပေးအပ်ခံခဲ့ရပြီးမှ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး ရာထူးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့  အမျိုးသမီး ဒေါ်မာလာတင့်ဟာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူ ဖြစ်ပြီး ရာထူးနဲ့ အာဏာကို ငွေကြေးနဲ့ လမ်းခင်း၍ အဆင့်ဆင့် တက်လမ်းရရှိအောင် စွမ်းဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း စစ်တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နံမည်ကြီး လူပြောများခဲ့တာ သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ခင်မောင်သန်းအနေနဲ့ ကက(ကြည်း) စစ်ဆင်ရေး ဌာနကြီးမှာ Col. G.S ဖြစ်နေချိန်က ၁၉၈၈ လူထု အုံကြွမှု အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးခါစ အချိန်မို့ တပ်အတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ အလုပ်အရှုပ်ဆုံး အချိန်ကာလ တခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်း အာဏာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်တို့အပြင် မာကျောခက်ထန် လှတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်မြင့်အောင်၊ ဗိုလ်မောင်လှ၊ ဗိုလ်ထွန်းကြည်တို့နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံခဲ့ရပါတယ်။
စစ်ရေး ထူးချွန်တဲ့ ဗိုလ်မောင်လှဟာ စစ်ဆင်ရေး အထူးကွပ်ကဲရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ရှေ့ တန်း စစ်ဆင်ရေး နယ်မြေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ တပ်မ (၆၆) တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အေးကျော် (နောင်အခါ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး) ကို လေးကေမှာ ရန်သူ့ လက်နက်ကြီး မော်တာ ထိမှန် ဒဏ် ရာရနေတာမို့ ကက(ကြည်း) ထံ အရေးပေါ် ရဟတ်ယာဉ်တောင်းခံတဲ့ ဖြစ်စဉ် တခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ခင်မောင်သန်းက ရဟတ်ယာဉ်တောင်းခံလိုရင် Safety Zone လုံခြုံရေး ဧရိယာ ရှိမရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပြန်လည် မေးမြန်းနေတာမို့ ဗိုလ်မောင်လှက ဒေါသတကြီး ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ တပ်ချုပ် ဗိုလ်စောမောင်ဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံရေး ဖိအားတွေကြောင့် စိတ် ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေချိန်မှာ Col. G.S ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ခင်မောင်သန်းကို အမိန့် မနာခံမှုနဲ့ စစ်ရုံးမှ မောင်းထုတ်ခိုင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဒုချုပ် ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေက ဗိုလ်ခင်မောင်သန်းကို သနားဂရုဏာသက်ပြီး တပ်မ (၈၈) ဒုတပ်မမှူးအဖြစ် နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗိုလ်ခင်မောင်သန်းရဲ့  ဇနီး ဒေါ်မာလာတင့်ဟာ ကုန်းမြင့်သာက ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့  အိမ်တော်ကြီးကို ချောင်းပေါက်မတတ် ကူးလူးဆက်ဆံ တပည့်ခံကာ မယ်တော်ကြီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အား အစွမ်းကုန် ``ဖား´´ နေခဲ့ပါတယ်။
တင်ပြသူ ကိုဖိုးတရုတ် http://photayokeking.myanmarbloggers.org/2008/12/blog-post_7593.html
Title: Lieutenant-General (BC.10320, OTS.31)
Chief of Bureau of Special Operation -3(Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)
SPDC MEMBER since 1997
Age: Late 50s (as at 2008)
Married to: Daw Malar Tint
Retired: June 2008 (see article below please)
He also commands-
* Arakan State,
* Bago Division, and
* Irrawaddy Division.
In 1988, Khin Maung Than wasaLieut-Col commanding the 89th BuRgt at Kale (North-Western Military Region) under Brig-Gen Tun Kyi, one of the original SLORC members.
In 1991, he was Colonel-General-Staff (Operations) at the War Office in Yangon under Brig-Gen Tin Oo, the then SLORC Secretary-2.
In 1992, Khin Maung Than was promoted to command the elite LID-11 at Htauk-kyant which is responsible for the security of Yangon. The Commander of the Yangon Military Region at that time was Brig-Gen Myo Nyunt, one of the original SLORC members.
In 1995, Khin Maung Than was promoted to Brig-Gen and became the Yangon Military Region Commander.
He was reportedly hand-picked by Than Shwe.
In 1997, he was promoted to the rank of Major-Gen and appointed to the SPDC.
His contemporaries in Officer Training School were:
* Lieut-General, Ye Myint, BSO-1;
* Lieut-General Maung Bo, BSO-4;
* Colonel Aung Thaung – BC.10307, Minister for Industry 1 (1997-).
1. Southern MR, Toungoo, Bago Div
2. LID-66, Inma, Bago Division
3. LID-77, Bago, Bago Division
4. ROC-Prome, Bago Division
5. South Western MR, Bassein, Irrawaddy Division
6. Western MR, An, Arakan State
7. MOC-5, Taungup Station, Arakan
8. MOC-9, Kyauktaw Station, Arakan
9. MOC-15, Buthidaung Station, Arakan
10. ROC-Sittwe, Arakan State
Reshufling - June 2008 (excerpt)
Posted by WATCHDOGS at 9:48 AM
Labels: ခင်မောင်သန်းမိသားစု Khin Maung Than and family
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်သန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတင်ထားတာ၊ မှားနေပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတာ သွားလေသူ တွင်း-၂ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးရဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပေးပါရန် တိုက်တွန်းပါတယ်။ သမိုင်းဝင် တရားခံများပုံ ဖြစ်သဖြင့် အရေးကြီးပါတယ်။.
အရေးကြီးအချက်အလက်များ၊ အင်တာနက်တွင် မှားယွင်းမှု မကြာခဏတွေ့နေရပါသည်။
NDD ဒီမိုကရက်တစ်သတင်းကွန်ယက်မှ သတင်းတခုတွင် လည်း တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ၏မြေး၊ စိန်မျောက်မျောက်(ခ) ဖိုးလပြည့်(ခ) နေရွှေသွေးအောင်၏ ဖခင်အမည်ကို ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး နေစိုးမောင် (လေ) ဟု မှားယွင်းဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
အမှန်မှာ မဆလခေတ် ထောက်လှန်းရေးမှူးချုပ် ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်တင်စိန်၏သား၊ ဒေါက်တာနေစိုးမောင် ဖြစ်ပြီး၊လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘွဲ့ကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှရယူခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်တွင် ဆေးမှူး(ပါရဂူ) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့ရာ၊ ယခု လင်မယား ကွဲကာ စစ်တပ်မှထွက်လိုက်ရပါသည်။
ွှဤကဲ့သို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ watchdogs မှ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရာတွင် ယခုတင်ထားသော ဓါတ်ပုံမှာ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်သန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံစစ်မှန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။ (လင့်များကို ကြည့်ပါက တွေ့ ပါမည်။) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးပုံနှင့် ဆင်ဆင်တူသော်လည်း မဟုတ်ပါကြောင်း အတည်ပြု ပါသည်။
တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ၏မြေး သတင်းအချက်အလက် ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ post တွင် လင့် လုပ်ထား လိုက်ပါသည်။
Hi, Aung zaw ye myint wife name is Aye Mya Aung not Aye Mya thar, His dad is minister Aung min and mom is Dr wai wai thar who is sister of minister U soe thar. The son of Lt general tin aye name is Okaka Aye . he isamajor. The daughter of maung bo who is sister of kyaw swar myint name is Nyein nyein myint. she is third secretary in Myanmar embassy to Japan. By the way, pls change the khin mg than photo to aung htwe and aung htwe to khin maung than. It was wrong! to be continue.....
Thank you for your information. We will link them to the relevant posts. We will also check the photos. They are very similar but thank you for pointing out.
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ထွေးမှာ ပုံသေးက ခင်မောင်သန်းပုံပါ။ နောက် ဒေါ်ခင်စောနှင်းက စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က စာရင်းအင်းပညာနဲ့ ကျောင်းပြီးတာ။ ဒေ၀ါရွှေက ဘောဂဗေဒနဲ့ ကျောင်းပြီးတာ။